Izinhlelo ze-Hi-Fi kanye ne-Acoustic Diffusion Systems - IHiFriends Catania
Kuvaliwe: NgoMsombuluko ekuseni nangeSonto
Kusukela ngoMsombuluko ntambama kuya ngoMgqibelo
Izinhlelo ze-Hi-Fi kanye ne-Acoustic Diffusion - HiFriends Catania
Bonke ubuhle bomculo omuhle ngezinhlelo ze-High Fidelity.
Izinhlelo ze-Fidelity Stereo ephezulu, izinhlelo ze ukusakazeka kwe-acoustic, Itiyetha lasekhaya, Sawubona-Fi, Isidlali sokurekhoda, izikhulisi, Ama-headphone nakho konke abathandi be umculo wezwa ngaphakathi Ubumbano oluphakeme. Sawubona Abangane kungumbuso we Izinhlelo ze-Hi-Fi a Catania ngayo yonke imikhiqizo ehamba phambili embonini.
Izinhlelo ze-Hi-Fi, izikhulisazwi nezikhulisi: Hi-Friends eCatania ziletha imisindo ye-High Fidelity ekhaya lakho
Umhlaba we Umculo Wokwethembeka Okuphezulu futhi eminye imisindo in Incazelo Ephakeme ifinyelele emazingeni okwenza okuhle ongawathola futhi uzwe ngezindlebe zakho kuwo Sawubona Abangane a Catania. Lapha uzothola okuhle kakhulu kwe- ubuchwepheshe Ubumbano oluphakeme ngayinye izinhlelo ze-acoustic diffusion, izikhulisi, Itiyetha lasekhaya, izikhulisazwi, ama-pre-amplifiers, amahedfoni nakho konke okuzungeza umhlaba we ukusabalala kwe-acoustic ku-Hi-Fi. Ukuthembeka nodumo lwemikhiqizo ekhethwe yi-Hi-Friends kuyisiqinisekiso sekhwalithi ephezulu ngayinye uhlelo lwama-acoustic ehlongozwayo. Lapha uzothola imikhiqizo efana ne: Tecnofuturo, Greensounds, Polarisaudio, Tektron nabanye abaningi.
Ukuthembeka Okuphezulu: izinhlelo zekhwalithi ephezulu zomsindo nevidiyo eCatania
Sibonga yonke imikhiqizo enqenqemeni ku-Ubumbano oluphakeme, Sawubona Abangane isibe yindawo yabalandeli be ukwakhiwa komsindo. Amakhanda nezingalo ze umdlali wokuqopha, izintambo zesiginali namandla, izikhulisi ama-valve o isigaba esiqinile, abamukelayo, i-floorstand, i-stand noma izipikha ezingenazintambo, ngezinye nje zezibonelo zomhlaba ohlukahlukene oxhunywe ku- Ubuchwepheshe be-Hi-Fi ukuthi isitolo sikunikeza. Lapha uzothola nabadlali be-Cd, I-Blu-ray, ITheatre yasekhaya nazo zonke izesekeli ezifanele ezizokuvumela ukuthi ukujabulele ngokugcwele amandla avuselelayo nawokuphumula we umculo. Inhliziyo nomphefumulo womnikazi kukhombisa konke ukuthanda kwakhe lo mkhakha: uyohlala ekujabulela ukukuneluleka futhi akusize ukhethe i-Uhlelo lwe-Hi-Fi evumelana nawe noma idumise izici zemodeli yakamuva Ukusabalalisa kwe-Acoustic. Uma ngabe umculo ngokusho kwabaningi, kuyindlela yokwelapha emnene yezifo eziningi, i- umculo wokwethembeka okuphezulu kungaba umuthi wenjabulo.
Ikheli: Nge-Milano, 94 / A.
Umakhala ekhukhwini: 339 2034772
Ifasitela lesitolo: www.mafinds.com
Inombolo ye-VAT: 05573420873